Antsirabe : nalevina ilay kisoa maty nihinana poizina | NewsMada
Antsirabe : nalevina ilay kisoa maty nihinana poizina
Par Taratra sur 12/01/2016
Lasa resabe ilay poizina noheverina fa vovo-tsira tao amin’ny fanariam-pako ao Ambohidava Ambohipeno Antsirabe izay nahafaty ilay zaza 3 taona sy tapany. Mbola tsaboina eny amin’ny hopitaly koa, ankehitriny, ny rain’ilay zaza maty sy ny zokiny vavy 14 taona noho ny fihinanana vary nisy io poizina io.
Ankoatra izany, nalevina kosa ilay vantotra kisoa maty vokatr’io poizina io ihany koa.
Marihina fa natrehin’ny manam-pahefana ao an-toerana sy ny dokoteran’ny BMH ny fandevenana ilay kisoa sao misy mivarotra ny hena ka hahafaty olona indray.
Miely ny feo ao an-tanànan’Antsirabe amin’izao fotoana izao fa ny orinasa Cotona ao Antsirabe no tompon’andraikitra tamin’ny fanariana ity poizina simika ity niaraka tamin’ny fako fanariny eny Ambohidava, toerana fanarian’ireo orinasa samihafa ny fakony avy.
Manoloana izany, ho fanazavana saim-bahoaka, nanao fanambarana tamin’ny mpanao gazety ao an-toerana, niaraka tamin’ny talen’ny kabinetran’ny kaominina, tao amin’ny efitrano fivorian’ny lapan’ny Tanànan’Antsirabe ireo tompon’andraikitra ambony avy ao amin’ny Cotona izay nahitana ny DG sy ny SG, ary ny tompon’andraikitra voalohan’ny fako ao anivony, tamin’ny zoma hariva lasa teo.
Nambaran’ireto farany fa voasokajy araka ny maha izy azy daholo ny fako tsy maintsy hariana. Araka izany, tsy azo ampiarahina amin’ny fako ariana ny fanafody simika rehetra fa tsy maintsy atokana. Manamafy ny Cotona fa tsy ny orinasany no tompon’antoka tamin’izao tranga nahafatesan’olona izao.